Umzimba ogqibeleleyo, Ubuhle kwiGrisi yakudala | Ukuhamba kwe-Absolut
maruuzen | | EGrisi
Ubuhle yinkcubeko, into entle namhlanje ibingazange intle ngaphambili, into eza kuba ntle kwinkulungwane inokuba yahluke kakhulu kule siyijonga ngale ndlela namhlanje. Kodwa kuyinyani ukuba namhlanje iipateni ngokubanzi zilawulwa ngandlel 'ithile ngamaGrike amandulo awayekugqala kufanelekile ngobuhle. Ewe, Umzimba ogqibeleleyo kunye nobuhle bazalwa kwiGrisi yamandulo.
Siza kuthetha namhlanje, ke, ngomthombo wobuhle kwihlabathi lethu: iGrisi yamaGrike. Apho, kwiinkulungwane ezidlulileyo, eyona migangatho yethu ihlala ihleli yomzimba ogqibeleleyo nobuhle yazalwa.
1 IGrisi yakudala
2 Ubuhle obugqibeleleyo
3 Umzimba ogqibeleleyo
Eli ligama lexesha kwimbali yaseGrisi, ethi, ngokubanzi, ibekwe phakathi kwenkulungwane yesi-XNUMX neyesi-XNUMX BC. ukusuka C. Lusuku lwepolisi yamaGrike kunye nobukhazikhazi benkcubeko. Obu buqaqawuli buqapheleka ngokukhethekileyo kwimifanekiso eqingqiweyo, eyabeka iziseko zobu bugcisa ukusukela ngoko.
AmaGrike ajonga umzimba kwaye umzimba, ukuba wawumhle, ubonakalisa ingaphakathi elihle. Igama leempawu zombini, njengamacala amabini engqekembe enye, lalinjalo kaloskagathos: intle ngaphakathi kwaye intle ngaphandle. Ngokukodwa ukuba wayengumfana.
Le ndlela yokucinga ibonakaliswe kwimifanekiso eqingqiweyo, uluvo lokuba umfana omhle usikelelwe kathathu, ngobuhle bakhe, ngobukrelekrele bakhe, nangokuthandwa ngoothixo. Kangangexesha elide bekucingelwa ukuba imifanekiso eqingqiweyo yeli xesha imele loo mbono, intelekelelo, umnqweno, kodwa inyani kukuba ukubumba kufunyenwe, ke namhlanje kuyaziwa ukuba Ezo mifanekiso iqingqiweyo intle yenziwa phakathi kwenkulungwane yesi-XNUMX neye-XNUMX BC zazisekwe kubantu bokwenyani.
Indoda yagutyungelwa ngeplasta kwaye kamva ukungunda kwasetyenziswa ukubumba umfanekiso oqingqiweyo. AmaGrike, sithetha ngawo amadoda achithe ixesha elide ejimini (Ukuba babezizityebi kwaye babenexesha lasimahla, ngokucacileyo). Ummi ophakathi waseAthene okanye waseSpartan wayenomzimba oqingqiweyo njengemodeli yeVersace: isinqe esincinci, umqolo, ipenisi encinci kunye nolusu olunamafutha ...
Oko ngokubhekisele emadodeni, kodwa yintoni ubuhle besiGrike bobuhle babasetyhini? Ewe kwahluke kakhulu. Ukuba ubuhle endodeni yayiyintsikelelo, emfazini yayiyinto embi. Umfazi omhle wayefana nengxaki. kalon kakon, intle kwaye imbi into, inokuguqulelwa. Umfazi lowo wayemhle kuba eyinzwakazi, emhle nasebusweni. Loo mgca wokucinga.
Kwaye kubonakala ngathi kukhuphiswano lobuhle: bekukho imincintiswano yoonobuhle ebizwa kallisteya, apho izehlo zenzeka kwiziqithi zaseLesbos naseTenedos apho kugwetywa khona amantombazana. Umzekelo, kwakukho ukhuphiswano imbeko Aphrodite Kallipugos kunye neempundu zakhe ezintle. Kukho ibali elijikeleze ukukhangelwa kwesiza sokumakhela itempile eSicily eyagqitywa ekugqibeleni phakathi kweempundu zeentombi ezimbini zamafama: ophumeleleyo wakhetha isiza sokwakha itempile, kuba enedonki engcono.
Yintoni ethathelwa ingqalelo intle eGreek Classical? Ngokwemizobo eqingqiweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo, uluhlu oluncinci lunokwenziwa ngento amaGrike amandulo awayeyithatha njengomzimba omhle: izidlele kufuneka zibe pinki (eyendalo okanye yendalo), iinwele kwakufuneka zichetyiwe okanye zilungiswe kakuhle kwimiqulu, ulusu kufuneka lucace y Amehlo kufuneka abe ne-eyeliner.
Umzimba ogqibeleleyo womfazi kufuneka ube isinqe esibanzi neengalo ezimhlophe, apho amaxesha amaninzi babephuma ngabom ngomgubo. Ukuba le ntokazi ibomvu ebomvu, siyavuyisana. Kungenzeka ukuba kwi-Middle Ages redheads babeneyona ilahleko inkulu, ngobugqwirha kunye nezo zinto zingaqhelekanga, kodwa kwi-classical Greece babenqulwa. Iibhlondes? Khange babenalo nexesha elibi. Ngamafutshane, uthixokazi I-Aphrodite okanye uHelen waseTroy zazifana nezinto ezintle zobuhle.
Uluvo lwezinqe ezibanzi kunye nolusu olumhlophe eneneni lwalugcinwa kangangeenkulungwane ezininzi: umzimba owomeleleyo uhambelana nesondlo esifanelekileyo kwaye ke, ubomi bokuphila kakuhle. Ulusu olumhlophe luyafana, kwaye, ngokungabi likhoboka okanye ukwenza umsebenzi ngaphandle kodwa ngaphakathi.
Kodwa ke, njenganamhlanje, ukuba mhle nokuba nomzimba ogqibeleleyo kubandakanya umbingelelo. Bambalwa abazalwa bechukunyiswa ngumlingo womlingo. Umnqweno wokugcina ulusu lumhlophe, okanye ukwenza mhlophe, kukhokelele abasetyhini ukuba babhenele kwiindlela ezinokuchaphazela impilo yabo.
Enye yezimvo zokuqala kwizithambiso zamandulo ngokuchanekileyo ukususela ngelo xesha. Isithandi sobulumko esingumGrike uTeofastus de Eresos ukwenze oko xa echaza indlela abenza ngayo i I-wax okanye ukhilimu osekwe kwilothe. Ngokucacileyo, ukukhokela kwaye kunjalo Inetyhefu.
Ukusetyenziswa kwe makeup Yayixhaphakile iklasi ephezulu kuba yonke into yayixhaphaza ubuhle, kodwa zazikhona iindlela ezininzi. Oonongogo babenabo kunye nabafazi bosapho olulungileyo, elinye. Kwanele ukubona ukuba le ntokazi yenziwe njani ukuba yahlule, kuba eyokuqala yayisebenzisa amehlo alayishwe kakhulu kunye nemilebe eqaqambileyo, iinwele ezidayiweyo kunye neempahla ezinesibindi. Njengesiqhelo.
Zaziyintoni Isitayile esinenwele KwiGrisi Yamandulo? Eyona mizekelo indala yeenwele kumabhinqa amaGrike ayibonisa nge qhina, ezininzi nezincinci. Ukuba sijonga iimbiza, umzekelo, ungasibona esi sitayile, kodwa ngokucacileyo ngokuhamba kwexesha ifashoni itshintshile.
Kubonakala ngathi ngeenxa zonke kwinkulungwane yesi-XNUMX endaweni yokunxiba iinwele zabo phantsi baqala ukuzinxiba zibotshiwe, zihlala zikwi-a isantya. Baye basebenzisa imihombiso kunye nokuhombisa ezahlukeneyo ezifana nobucwebe okanye into yokubonisa ubutyebi bosapho. Ngaba ifayile ye- iinwele ezimfitshane? Ewe yayifana usizi okanye imeko ephantsi yentlalo.
Ewe kubonakala ngathi iinwele ezikhanyayo zazibaluleke ngaphezu kobumnyama, ke yayiqhelekile ukusebenzisa iviniga okanye incindi yelamuni ukuyicacisa ngokudibanisa nelanga. Kwaye ukuba bafuna ii-curls, bazenza kwaye bazifaka nge-bex ukwenzela ukuba iinwele zihlale ixesha elide. Kwaye uthini nge iinwele zomzimba? Ngaba ababhinqileyo abangamaGrike babenoboya njengoko abafazi babesoloko kunjalo kude kube yinkulungwane ye-XNUMX?
Ukususwa kweenwele kwakuqhelekile kwaye enyanisweni, hayi kuphela phakathi kwamaGrike kodwa nakwezinye iinkcubeko. Ngelo xesha, kwi-Classical Greece, ukungabikho kweenwele kwakusemfashinini, nangona kukho iithiyori ezininzi malunga nendlela abaziphumeze ngayo iinwele. Kuthiwa iinwele zikawonke wonke zazitshiswa ngedangatye okanye zichetyiwe ngesitshetshe.
Ke ukuba umfazi uhambe ngexesha namhlanje, Zeziphi iimveliso ezingenakuphoswa kwitafile yakho yokunxiba?yesikhumba esomileyo kwaye ukuba ibifakwe amayeza anencasa njengoko inika ivumba lomzimba okanye leenwele; imayela kwizithambiso, iinyosi zidityaniswe namanzi e-rose kunye nothotho lweziqholo ezenziwe ngeoyile eyimfuneko yokufaka iioyile kunye neentyatyambo ezinuka kamnandi, amalahle yamehlo, amashiya kunye namashiya kunye nezinye izimbiwa, xa umhlaba, wawusebenza njengezithunzi kunye ne-blushes.
Inye inyani: ishiya elinye Oku kuphunyezwe ngokupenda umgca ngamalahle okanye, ukuba akwanelanga, bancamathisela iinwele zezilwanyana ngentlaka yemifuno.
Kuyinyani ukuba Kwi-Classical Greece, amagcisa ayichaza ngokutsha ingcinga yobuhle bomzimba kumadoda nabasetyhini ukuyila umbono we "Umzimba ofanelekileyo." Umzimba womntu wawuyinto eyonwabisayo kunye nokubonisa ubukrelekrele bengqondo.
AmaGrike aqonda ukuba imfezeko ayikho kwindalo, ubugcisa bunikezelwa. Ke kukho umbono wokuba Umzimba oqingqiweyo uyilo olusulungekileyo. Ngasentla satsho ukuba abakroli abangamaGrike basebenzise iimodeli zokwenyani, kuyinyani, kodwa ngamanye amaxesha yayingeyiyo imodeli enye, kodwa uninzi. Umzekelo, iingalo zenye, intloko yenye. Ke, ukuncoma okuhle ngelo xesha yayikukuxelela umfana ukuba wayefana nomfanekiso oqingqiweyo.
Ukuba i-Aphrodite yayiyinto efanelekileyo yobuhle besetyhini, I-Heracles yayiyinto efanelekileyo yomzimba wesilisa ogqibeleleyo. Imbaleki, indoda ebalaseleyo, ukumelwa ngokwesini kunye nomnqweno. Njenganamhlanje ngetattoos, i ubugcisa bomzimba kunye nokuphakamisa iintsimbi, emva koko bendijonga umzimba wabanye kunye nowam.
Ubugcisa bamaGrike babugxile ngakumbi kwifom yamadoda ngaphezu kobufazi kwaye unomdla wokubona ukuba, ngokuhamba kwexesha, ubugcisa bulandele njani indlela eguqukayo, egxila ngakumbi kubafazi kunamadoda. Makhe sicinge malunga namaXesha Aphakathi, iRenaissance okanye iifom zeBaroque.
Ekuboniseni, impikiswano malunga nomzimba kunye nobuhle ihlala igqamile. Ukususela kumaxesha amandulo ukuza kuthi ga namhlanje, ukusuka kuNefertiti kunye no-Aphrodite, ukuya kubafazi bakaRubens, uMarilyn Monroe, iisupermodels ze-90s kunye nosaziwayo benkulungwane yama-XNUMX ngothintelo lweplastiki, siyaqhubeka nokujonga into efanelekileyo yomzimba womntu ngakumbi kokunye ngaphandle kwethu.
Ke, ngoku uyazi, kwixa elizayo xa undwendwela imyuziyam kwaye ufumana imifanekiso eqingqiweyo, jonga kakhulu loo mizimba kunye neyabantu abakujikelezayo. Umbuzo ngulo, siyakuyamkela nini into enjalo kwaye indalo yasenza?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Umzimba ogqibeleleyo, uBuhle kwiGrisi yakudala